Ruushka ayaa dib u bilaabay duulimaadyadii Ciraaq, Kenya, Slovakia iyo Spain, duulimaadyada Afghanistan waa inay sugaan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Ruushka ayaa dib u bilaabay duulimaadyadii Ciraaq, Kenya, Slovakia iyo Spain, duulimaadyada Afghanistan waa inay sugaan
Wararka Afgaanistaan • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Wararka Ciraaq • Wararka Kenya • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Ruushka • Ammaanka • Slovakia Wararka Jebinta • Wararka Spain • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Ruushka ayaa dib u bilaabay duulimaadyadiisii ​​Ciraaq, Kenya, Slovakia iyo Spain, duulimaadyada Afghanistan waa inay sugaan
Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah ilaha dawladda Ruushka, go'aanka diyaarinta duulimaadyada rayidka ee caadiga ah ee Kabul iyo bixinta boosaska jadwalka ee shirkadda diyaaradaha ee Ruushka ayaan weli la gaadhin. Wali waa dhicis in laga hadlo bilowga duulimaadyada madaniga ah ee halkaas si joogto ah.
Ruushka ayaa dib u bilaabaya adeegga hawada afar dal oo kale.
Duulimaadyadii Moscow ilaa Kenya, Slovakia, Iraq iyo Spain ayaa dib u bilaabanaya.
Ma jiro wax duulimaad ah oo ka imanaya Ruushka oo tagaya Afgaanistaan.
Isagoo tixraacaya xarunta dhibaatada qaran ee ka-hortagga COVID, dowladda Ruushku waxay maanta ku dhawaaqday in Xiriirka Ruushku uu dib u bilaabi doono adeegga duulimaadka rakaabka ee jadwalka ah ee la qorsheeyay Ciraaq, Kenya, Slovakia iyo Spain laga bilaabo Sebtember 21, 2021.
“Ruushku wuxuu dib u bilaabayaa adeeggii hawada Spain, Ciraaq, Kenya iyo Slovakia laga bilaabo 21 -ka Sebtember,” ayay saraakiishu ku qoreen dowladda Federaalka Ruushka telegraam channel.
Duulimaadyada Masar iyo Turkiga ee afar magaalo oo kale oo Ruush ah - Pskov, Magadan, Murmansk, iyo Chita, ayaa sidoo kale dib loo bilaabi doonaa 21 -ka Sebtembar.
Isla mar ahaantaana, mas'uuliyiinta Ruushku waxay muujiyeen rabitaankooda ah inay dib u soo celiyaan safarkii caadiga ahaa ee duulimaadka rakaabka ee Afgaanistaan.
Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah ilaha dawladda Ruushka, go'aanka diyaarinta duullimaadyada rayidka ee caadiga ah leh Kabul iyo bixinta boosaska loogu talagalay jadwalka ay qaadeen diyaarad -cirka Ruushku weli lama samayn. Wali waa dhicis in laga hadlo bilowga duulimaadyada madaniga ah ee halkaas si joogto ah.
Si dib loogu bilaabo xiriirkii joogtada ahaa ee Kabul, go'aanka habboon ee xarunta hawlgalka ayaa loo baahan doonaa si looga hortago soo dejinta iyo faafitaanka caabuqa COVID-19.
Dhammaan kaabayaasha madaarka ee daruuriga ah waa in marka hore laga abuuro Kabul si loo hubiyo shaqada maamulayaasha taraafikada hawada si waafaqsan heerarka badbaadada duulista rayidka ee caalamiga ah.
Waxaa hore loo soo sheegay in mas'uuliyiinta Daalibaan ay ku dhawaaqeen rabitaankooda ah inay dib u bilaabaan isu socodkii hawada ee Ruushka iyo Turkiga.